८० प्रतिशत मुटुरोग खानपानको अधीनमा हुन्छ – Health Post Nepal
८० प्रतिशत मुटुरोग खानपानको अधीनमा हुन्छ
२०७५ असोज २७ गते ८:४१
मुटुरोगीसँगै अहिले हृदयाघातको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । हृदयाघातका कारण बर्सेनि धेरै मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । हाम्रा दैनिक क्रियाकलापमा केही मात्रै सुधार गरेमा पनि मुटुरोगबाट बच्न सकिन्छ । तर, आधुनिकतासँगै मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण मुटुरोग अहिले नेपालमा मात्र नभई संसारभर चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । मानिसको खानपान तथा जीवनशैलीका कारण मानव स्वास्थ्य तथा मुटुमा के–कस्ता असर देखापर्छन् भन्ने विषयमा सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ज्योतीन्द्र शर्मासँग लक्ष्मी चौलागाईंले गरेको कुराकानी:
आममानिसले बुझ्ने भाषामा मुटु के हो ?
मुटु मानव शरीरको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । यो छातीको दाहिनेतिर मासुको मांसपेशीले बनेको हुन्छ । यसका ४ वटा खण्ड हुन्छन् । मुटुले रगत प्राप्त गर्ने तथा शरीरभरि पु¥याउने काम गर्छ । अक्सिजनको मात्रा कम भएको रगत मुटुको दाहिने भागमा आउँछ । यसलाई मुटुले फोक्सोमा पठाउँछ । फोक्सोमा गएपछि उक्त रगतले अक्सिजन पाउँछ । अक्सिजन पाएपछि रगत मुटुको देब्रे भागमा आउँछ । देब्रे भागमा आएको अक्सिजन र अन्य तत्व भएको रगतलाई मुटुले पम्प गरेर शरीरको विभिन्न भागमा पु¥याउँछ । मुटुको दाहिनेतिरको भागले फोक्सोमा रगत पम्प गर्छ । औसतमा १ मिनेटमा एउटा ६०–७० किलोको मान्छेमा ५ लिटर रगत मुटुमा आउँछ र त्यसलाई मुटुले पम्प गर्छ ।
हृदयाघात मुटुरोगमध्ये प्रमुख हो । रगत पम्प गर्ने मात्र नभएर मुटुलाई काम गर्न पनि रगत चाहिन्छ । मुटुले विभिन्न धमनीहरूका माध्यमबाट रगत प्रदान गरिरहेको हुन्छ ।
मुटुमा के–कस्ता रोग लाग्छन् ? के मुटुरोग मानिसको नियन्त्रणमा छ ?
जन्मजात भएको मुटुरोगलाई मानिसले रोक्न सक्दैन । जन्मजात मुटुरोग लागेका व्यक्तिले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न समयमा मुटुमा समस्या आएमा चिकित्सकको सल्लाहमा मुटु परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा मुटुको भल्भ बिग्रन पाउँदैन । मुटुरोगको प्रकृतिअनुसार यसका लक्षण देखापर्ने गर्छन् । बाथ मुटुरोगीमा शरीरका जोर्नीहरू दुख्ने समस्या देखापर्छ । त्यस्ता बिरामीहरू हिँड्दा बढी मात्रामा स्वाँ–स्वाँ गर्ने गर्छन् ।
जन्मजात मुटुरोगीले सामान्य मानिसजस्तै क्रियाकलाप देखाउन सक्दैनन् । त्यस्तै, उनीहरूको शरीरमा विभिन्न संक्रमण हुने गर्छ । उनीहरूको शारीरिक विकास राम्रोसँग हुन सक्दैन ।
हृदयाघात मुटुरोगमध्ये प्रमुख हो । रगत पम्प गर्ने मात्र नभएर मुटुलाई काम गर्न पनि रगत चाहिन्छ । मुटुले विभिन्न धमनीहरूका माध्यमबाट रगत प्रदान गरिरहेको हुन्छ । रगत प्रदान गर्ने मुटुको नली देब्रेतिर २ वटा र दाहिनेतिर एउटा हुन्छ । ती नलीमा कुनै अवरोध सिर्जना भएमा, नलीमा साँघुरोपन बढेमा रगत सञ्चालन कम हुन गई छाती दुख्छ । कुनै एक अवस्थामा रगतको नली पूरै ब्लक हुन्छ, जसले गर्दा रक्त सञ्चालन पूर्णतया बन्द हुन्छ । रगत सञ्चालन नभएपछि मुटुको मासु मर्छ, जसलाई हृदयाघात भनिन्छ ।
हृदयाघातमा के–कस्ता लक्षण देखिन्छन् ?
उकालो हिँड्दा गाह्रो हुन्छ । कसैलाई एक्कासि थिचेजस्तो महसुस हुन्छ । पेटको माथिल्लो भाग दुख्छ । कसैलाई चिउँडो दुख्छ । चिटचिट पसिना आउँछ । रिँगटा लाग्छ ।
हृदयाघातको उपचार विधि ?
हृदयाघातमा मुटुको नली ब्लक छ कि छैन भनी पत्ता लगाउन एनजियोग्राममार्फत मुटुको रक्तनलीको परीक्षण गरेर हेर्नुपर्छ । एनजियोग्रामपछि केही उपाय हुन्छन् । पहिलो उपाय औषधि खाएर निको गराउने हो । रगतको नली यदि धेरै ब्लक भएको छैन भने औषधि खाएर निको हुन सक्छ । धेरै ब्लक भएको छ भने एन्जियोप्लास्टी गर्न सकिन्छ । दोस्रो उपाय भनेको बाइपास सर्जरी हो । यदि मुटुको नली धेरै नै ब्लक छ, एकभन्दा बढी ठाउँमा ब्लक छ, अथवा पूरै ब्लक छ भने त्यस्तो अवस्थामा बाइपास सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ । बाइपास सर्जरी भनेको जुन भागमा ब्लक भएको हो, त्यो भागलाई केही पनि नगरी ब्लक भएको रगतको नलीमुनि गएर रगत सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक नली जोडिदिने हो ।
हृदयाघातमा बाँच्ने सम्भावना कति छ ?
हृदयाघातका बिरामी कति समय बाच्छन् भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन । हृदयाघात भएको कति समय भयो, बिरामी कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुराहरूमा निर्भर हुन्छ । हृदयाघात हुनुअघि नै एन्जियोप्लास्टी अथवा बाइपास सर्जरी गरेमा बिरामी सामान्य अवस्थामा पनि आउन सक्छ । यदि ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बिरामीको मुटुले काम गरेको छ भने एनजियोप्लास्टी बाइपास गरेमा उक्त व्यक्तिले सामान्य रूपमा दिनचर्या सञ्चालन गर्न सक्दैन । बिरामी कुन अवस्थामा उपचारका लागि अस्पताल आइपुगेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
मुटुलाई कसरी सुरक्षित राख्ने त ?
धूमपान तथा मद्यपान नगर्ने, नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने, तनावमुक्त रहने, सकभर बाहिरको खानेकुरा नखाने, फलफूल तथा तरकारीको मात्रा बढी खाने, नुन कम खाने, चिल्लो तथा बोसोयुक्त खानेकुराको सेवन कम गर्ने गरेमा मुटुरोगबाट बच्न सकिन्छ । दैनिक खानेकुरामा ध्यान दिएमा ८० प्रतिशतसम्म मुटुरोगबाट बच्न गर्न सकिन्छ ।
डा. ज्योतीन्द्र शर्मा